Ahoana ny fanaovana fonony: singa sary sy toetra ankapobeny | Famoronana an-tserasera
Loharano: Diario de Cádiz
Isan'andro dia mihamaro ny olona mivezivezy amin'ny alàlan'ny haino aman-jery dokam-barotra, na an-tserasera izany na ivelan'ny aterineto, saingy haino aman-jery manan-danja ho antsika izy ireo.
Ny tsy fantatry ny maro dia ny fomba famolavolana fonon-taratasy mifanaraka amin'ny lohahevitry ny gazetiboky, bilaogy na boky tsirairay, ary mifanaraka amin'izany. isan-karazany ny fahaiza-mamaky sahaza ary ambonin'izany rehetra izany, ny singa tsirairay amin'ny sary izay misy: endritsoratra, sary, sary na sary, dia apetraka amin'ny famoronana tonga lafatra.
Ny mpamorona dia tsy vitan'ny hoe afaka mahatakatra ny zavatra novolavolainy, fa tsy maintsy manome lanja ny tena zava-dehibe koa. Ary izany no antony ato amin'ity lahatsoratra ity dia hampiseho aminao ny maha-zava-dehibe ny fonony.
1 Ilay fonony
1.1.4 Anarana/laharan'ny taranja na kilasy
1.1.6 Anaran'ny mpampianatra
2 Ahoana ny fomba hanaovana tsara ny fonony
3 Karazana fonony
3.1 Ny fonony an'ohatra
3.2 ny fonon-tsoratra
3.3 Ny fonon-kevitra sy abstract
4 teknika famolavolana
4.1 mampiasa loko
4.2 Tonga lafatra ny entana
4.3 Mampiasà loharano toy ny fanoharana ary mahazo fitaomam-panahy
Loharano: Audrey's Croissant
Ny fonony no singa manan-danja indrindra amin'ny haino aman-jery rehetra, satria io no zavatra voalohany hitan'ny mpijery na mpamaky. Noho izany, ny zavatra voalohany anontaniana, no tsikeraina ary ny masontsika no sambany. Marihina ihany koa fa ny fonon'ny tesis na ny tetik'asa momba ny asa dia tsy maintsy izay manangona ny fampahalalana rehetra natsanganay sy fintinina amin'ny lohateny lehibe, dikanteny ary anarana voalohany sy farany.
Ary koa ny fampahalalana momba ny kilasy toy ny anarana na laharan'ny fampianarana, ny daty, ny anaran'ny profesora ary ny anaran'ny andrim-panjakana. Ny tsipiriany hafa tokony hodinihina dia ny hoe ny fonony dia tsy misy isa ary tsy maintsy misy sisiny eo amin'ny 2 santimetatra eo amin'ny lafiny tsirairay.
Source: ny fanaka
Ny zavatra tokony hojerentsika voalohany dia ny fizarana ireo singa tiantsika ampidirina ao amin'ny fonony, ka izany no ilaina.
Mora ny manao ny lohateny ary minitra vitsy monja. Izy io no ampahany voalohany amin'ny fonony ary singa voalohany hitan'ny mpamaky.
Noho izany antony izany dia tsy maintsy mitandrina ianao fa tsy misy hadisoana satria mety hiteraka fahatsapana ratsy izany; ny mpamaky dia afaka mandinika izany alohan'ny hanombanana ny kalitaon'ny atiny.
Ny lohatenin'ny asa dia tokony ho mazava sy marina mba ho mora fantatra ny momba ny asa. Misy fitsipika na fenitra APA izay ifehezana ny pejin-dohateny. Zava-dehibe ny mahafantatra ny fepetra manokana amin'ny departemanta, oniversite na andrim-panjakana manokana.
Amin'ny ankapobeny ao amin'ny tatitra siantifika, taratasy fikarohana ary thesis, ny lohateny dia mandeha eo afovoany ary mirindra, eo afovoan'ny pejy. Raha misy dikanteny ilay asa dia apetraka eo ambanin'ny lohateny.
Amin'ny resaka fiaraha-miasa dia tsy maintsy fantarina ny anarana fenon'ny mpikambana ao amin'ny vondrona. Ny anarana fenon'ny mpanoratra dia tsy maintsy hita eo amin'ny pejy lohateny. Tsy maintsy mametraka ny anarana feno ianao, miaraka amin'ny anarana voalohany, na anarana farany na anarana afovoany raha tianao.
Ity singa ity dia azo apetraka tsipika maromaro eo ambanin'ny lohateny. Ilaina ny fametrahana azy eo amin'ny fonony satria amin'izany fomba izany no ahafantaran'ny profesora na izay mamaky ny asa hoe iza no nanomana ny fikarohana, taratasy siantifika na thesis.
Misaotra ny mpanoratra, azonao fantarina mora foana hoe iza no nanao ny asa na fikarohana. Ny asa rehetra dia tsy maintsy manana mpanoratra iray na maromaro; midika izany fa tsy tokony ho tsy fantatra anarana mihitsy izy ireo. Ny tesis rehetra, fikarohana siantifika na asa akademika dia tsy maintsy manana mari-pankasitrahana amin'ny mpanoratra.
Amin'ny ankapobeny, ny datin'ny fanaterana ny asa dia apetraka eo amin'ny farany ambany amin'ny fonony, izany matetika no zavatra farany apetraka eo amin'ny fonony sy manamarina ny andro, volana ary taona nanaovana ny tetikasa.
Zava-dehibe ny fanoratana azy satria noho izany ny mpamaky dia afaka mahita ny daty nanoratana ny asa, ny thesis na ny fikarohana siantifika.
Raha ny momba ny fandrakofam-pahaizana momba ny oniversite na misy lohahevitra akademika kokoa, dia matetika no apetraka:
Anarana/laharan'ny taranja na kilasy
Ilaina ny mametraka ny anaran'ny kilasy na lohahevitra eo amin'ny fonony mba ho fantatra haingana ny lohahevitra na ny faritra fikarohana momba ny asa. Ny mpamaky iray dia tokony ho afaka hamantatra haingana ny sehatry ny fianarana mba hahafantarana hatrany am-piandohana ny momba ny thesis na ny asa akademika.
Raha toa ka manana isa ny kilasy dia tsy maintsy apetraka ihany koa izany mba ahafahan'ny mpampianatra mamantatra hatrany am-piandohana izay kilasy misy ny mpianatra/asa hodinihina. Manamora ny asa izany.
Eo amin'ny fonony dia tsy maintsy apetraka ny diplaoma ianarana na ny taranja itarihana ny asa. Ilaina ny mametraka izany eo amin'ny fonony satria amin'izany fomba izany no ahafahanao mahafantatra ny ambaratongan'ny fampianarana ananan'ny mpanoratra rehefa manoratra ny taratasy akademika na thesis.
Eo ambanin'ny toerana misy ny anaran'ny kilasy dia azonao atao ny mametraka ny anaran'ny mpampianatra feno. Ilaina izany satria amin'izany fomba izany no ahafantaran'ny mpamaky hoe iza no natokana ho an'ny asa. Ny mpampianatra no manendry na miandraikitra ny taratasim-pianarana amin'ny taranjany manokana.
Ny pejin-dohateny sasany koa dia ahitana ny toerana nanoratana na nanaovana ny asa akademika. Manampy amin'ny fahafantarana mora foana hoe avy aiza ny fikarohana; ao amin'ny toerana misy ny fanjakana na faritany ary ny firenena niavian'ny asa na ny thesis.
Matetika eo amin'ny faran'ny fonony no misy azy io, na dia mety hiovaova aza izany arakaraka ny asa akademika na ny andrim-panjakana manokana
Ahoana ny fomba hanaovana tsara ny fonony
Mba hamolavolana tsara ny fonony dia ilaina ny mandinika lafin-javatra maromaro:
haben'ny taratasy: matetika dia DIN A4 izany
Haben'ny endri-tsoratra: Raha atao fanontam-pirinty dia tsara foana ny manana isa 12 fara-fahakeliny ary mampiasa endri-tsoratra azo vakiana tsara.
Raha ny sisiny voaporofo fa tsy maintsy: amin'ny fiaramanidina ambony 3cm, amin'ny ankavia 4cm, amin'ny toerana ambany 3cm, amin'ny ankavanana 2cm.
Loharano: Asa fanaovan-gazety
Ny fonony an'ohatra
Ny fonony an'ohatra dia karazana fonony manokana ary iray amin'ireo be mpampiasa indrindra satria ny sary dia ampiasaina, amin'ny ankapobeny, nentim-paharazana. asiana singa tany am-boalohany hanampiana hatsikana na ny faharanitan-tsaina, sady manome fahatsapana fitsangatsanganana izay manasa ny mpamaky hividy ny gazety sy hiroboka ao anatin'ny fahafinaretana.
Io no safidy faran'izay kely indrindra ampiasaina amin'izao fotoana izao, izay lahatsoratra no tena ampiasaina, na lahatsoratra sy sary ambadika manaitra. Saingy ny marina, satria tsy fahita firy izany, dia afaka manampy amin'ny fanatrarana ny tanjonay: misarika ny sain’ny mpamaky.
Ny fonon-kevitra sy abstract
Azo raisina ho toy ny fonony manaitra izy io, indraindray ampiasaina amin'ny gazetiboky sary na amin'ny olana momba ny famolavolana. Mampiasà sary na sary izay mampita hevitra sarotra ny famolavolana azy na sarotra haingana, mora sy tsotra.
Ny sasany amin'ireo fandrafetana gazetiboky mahomby indrindra dia mampiasa loko tsy dia misy dikany loatra, izay manaporofo fa ny loko marevaka tsotra dia mety manaitra kokoa noho ny palette miloko marevaka.
Ampifandraiso amin'ny loko tokana miaraka amin'ny sary mainty sy fotsy ary lahatsoratra misy tonony monochrome, toa mahafinaritra ho an'ny gazetiboky lehilahy sy anaram-boninahitra teknolojia. Ny typografia mamirapiratra, sora-baventy ary mpizara dia manome endrika ara-panatanjahan-tena sy maha-lehilahy.
Tonga lafatra ny entana
Raha vao manokatra ny gazety ny mpamaky dia ny votoatin'ny pejy no fiatoana voalohany. Ny votoatin'ny pejy dia tokony ho azo ampiasaina ary mamela ny mpamaky hahita fizarana sy lahatsoratra mora, fa io ihany koa no toerana tsara indrindra hanaovana famoronana kely.
Raha manana votoaty be dia be ny gazetiboky, dia aza ferana amin'ny pejy tokana ny votoatinao, amboary ho pejy roa feno ny atiny. Izany dia hanome anao toerana ampy hampidirana lohapejy lehibe ho an'ny atiny, manandrama endritsoratra serif fisaka na karazana endri-tsoratra hafa misy fiantraikany lehibe, ary sary manintona vitsivitsy.
Mampiasà loharano toy ny fanoharana ary mahazo fitaomam-panahy
Tsidiho ny fampirantiana gazetiboky rehetra dia ho hitanao fa ny ankamaroan'ny fonony dia mampiasa sary ho fitaovana fanaovana sary safidiny. Na izany aza, ny fonony misy an-tsary dia mety tsy manam-paharoa sy tena stylish, ary safidy tsara ho an'ny teknolojia, zavakanto ary anaram-boninahitra. Ny sary fisaka dia tena mora ny mamorona ary mety hahatonga ny gazetinao ho tena mijery tsara.
Fantaro ny Adobe Illustrator, CorelDRAW na Inkscape mba hamoronana sary vetaveta izay azo ampiasaina amin'ny famoronana InDesign anao.
Ny Vector dia fomba tsara hanehoana hevitra mibaribary kokoa na fantasy, ary vokatr'izany dia izy ireo no safidy tonga lafatra ho an'ny gazetiboky izay tsy mifanaraka amin'ny lamaody mahazatra na ny fomba fiaina.
Manantena izahay fa nianatra bebe kokoa momba ny famolavolana tonian-dahatsoratra ianao. Anjaranao izao ny manomboka mamolavola ny kisarisary voalohany amin'ny fononao voalohany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Ahoana ny fomba hanaovana ny fonony